Arọ ụkwụ ụkwụ - Ihe omume kachasị mma ị nwere ike ime na ha | Bezzia
Susana godoy | 11/01/2022 16:00 | Mmega ahụ
Akpụkpọ ụkwụ ụkwụ aghọwo otu n'ime ngwa ndị a na-achọkarị. O yiri ka ha aghọwo ejiji na ọ bụ eziokwu na a na-atụ aro ka ha rụọ ọrụ ntakịrị n'ime ụkwụ, ụda ha ma ọ bụ meziwanye ike ha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ha ga-agbakwunye mgbalị na mmegharị ọ bụla anyị na-eme. Ma kpachara anya, ị kwesịrị ịkpachara anya mgbe niile na ibu ị na-etinye na ha ka ị ghara imerụ ahụ.
Nke bụ eziokwu bụ na ha dị nnọọ irè ma na ha ị nwere ike imega ahụ n'ụlọ, dị mfe. A naghị egosi ha mgbe anyị na-ekwu maka ọzụzụ aerobic na anyị niile ma ka ọ ga-esi bụrụ ịga agba ọsọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị nzọ na arọ ndị a, ị ga-eme naanị usoro dị ka nke dị n'okpuru ebe a ma ị ga-amalite ịhụ nnukwu nsonaazụ ngwa ngwa karịa ka ị tụrụ anya ya.
1 Arọ ụkwụ: Glute igba
2 Rakwụ na-ebuli elu
3 Okpukpo Bulgarian
4 Mgbatị ụkwụ
Arọ ụkwụ: Glute igba
Otu n'ime ihe omume mbụ anyị nwere ike ime bụ nke a. Ọ bụ ihe a na-akpọ Glute kick n'ihi na ibido, anyị ga-atụgharị azụ otu ụkwụ dị ka igba. N'ezie, anyị ga-amalite site na quadruped ọnọdụ, na-ejide onwe anyị na ọbụ aka n'ala, ogwe aka na-agbatị na azụ azụ. Ikpere na-emetụ ala ma dị ka anyị na-ekwu, anyị ga-atụgharị otu ụkwụ azụ wee gbanwee gaa na nke ọzọ. Cheta na mgbe ị na-apịaji ya ọzọ ma ọ bụ mgbe ị na-ebuli ya, ị nwere ike weta ya n'obi gị ka ọ gbatịa ya ọzọ. Jiri ụkwụ ọ bụla mee ọtụtụ ugboro ugboro.
Rakwụ na-ebuli elu
Ọ bụ ezie na mmega ahụ dị ka nke a nwere ọdịiche ndị ọzọ. Ị nwere ike ime ya guzoro ọtọ, dabere na mgbidi ma ọ bụ dinara ala. Ọ bụrụ na ịhọrọ nhọrọ ikpeazụ a ị ga-emerịrị Dina n'otu akụkụ ma kwado ahụ gị n'ala, na-enyere aka gị aka ịkwado onwe gị. Ọ bụ oge ebuli ụkwụ n'ụzọ megidere, ka wee gbadaa nwayọọ nwayọọ. Dị ka ọ dị na mmega ahụ gara aga, ọ dị mma ịme ọtụtụ ugboro wee gbanwee akụkụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ya guzoro ọtọ, ị ga-akpachara anya na úkwù na ahụ gị ka ọ ghara ịgbanwe. Ya mere, ị ga-ejigide ọnọdụ kwụ ọtọ ma kewaa ụkwụ ị na-arụ ọrụ n'otu akụkụ, ma na-enweghị ịkwanye akụkụ ahụ gị ọzọ dị ka anyị kwuru.
Dabere oche n'akụkụ mgbidi ka ọ chekwaa ya. Ugbu a tụgharịa azụ ya ma kwado elu ụkwụ gị, na-atụgharị ụkwụ gị n'oche. Ahụ ahụ kwụ ọtọ na ụkwụ nke ọzọ, nke ibu dị arọ, dịkwa. Iji bido na squat anyị ga-emegharị ụkwụ anyị gbatịworo mana na-enweghị ikpere gafere mkpịsị ụkwụ.. Mgbe i jiri otu ụkwụ mee ọtụtụ ihe nrịba elu, ị kwesịrị ịgbanwe gaa na nke ọzọ.
Nhọrọ ọzọ dị mfe anyị nwere bụ nke a. Anyị ga-edina nnọọ ala n'elu akwa anyị n'azụ. Site na ịdị arọ na nkwonkwo ụkwụ, anyị ga-ehulata ikpere iji mee akụkụ 90º.. Ugbu a, anyị ga-agbatị ụkwụ abụọ ahụ elu ka ọ tụgharịa ha ọzọ. O doro anya na mbụ ọ ga-eri gị ntakịrị mana ị nwere ike ime ugboro ugboro ole na ole.
Anyị enweghị ike ịhapụ ohere ime ụfọdụ nọdu l'iphe-ẹhuka ọbu. Ha bụ ihe ọzọ dị mma iji buo obere ụkwụ na ụda mgbe anyị na-eme otu ihe ahụ na afọ anyị. N'ihi ya, dina ala ka anyị nọ maka mmega ahụ gara aga, anyị na-atụgharị ụkwụ anyị ọzọ n'akụkụ 90º. Ọ bụ oge na-ahapụ ha elu na anyị ga-eme otu ihe ahụ na ahụ. Cheta na aka anaghị adọpụ n'olu n'oge ọ bụla na anyị agaghị anwa ịga n'ihu, ma ahụ ga-abụ axis nke kwuru ije. Usoro dị mma ịmalite ọzụzụ gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Mmega ahụ » Mmega ahụ a ga-eji ịdị arọ ụkwụ mee ya